अल न्यू हुन्डाई टुसानको विक्री सुरु : ४ भेरियन्टमा उपलब्ध, मूल्य कति ? - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७८ भाद्र, २१ सोमवार
काठमाडौँ / हुन्डाई मोटर्सको आधिकारीक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘अल न्यू टुसान’ सार्वजनिक गरेको छ । हुन्डाईले फ्यूचरस्टीक डिजाइनमा तयार पारेको नयाँ जेनेरेशन टुसान विश्वभर चर्चामा रहेको मोडल हो ।
नेपाली एस्काभेटर बजारमा हुन्डाई नम्बर १, पायो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन
नयाँ वर्षमा ‘हुन्डाई चढौं, अघि बढौं योजनाः स्क्र्याचमा जित्नुस २० देखि ७८ हजारसम्म छुट, अन्य केके छन् ?
हुन्डाईको मिडिया टेस्ट ड्राइभ गोकर्ण फरेष्टमा